फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १४ फागुन २०७४) | गृहपृष्ठ
Home लगानी फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १४ फागुन २०७४)
लगानी 62 views
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १४ फागुन २०७४)
कम्पनीले फागुन १८ गतेदेखि ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गर्ने भएको छ । सो हकप्रद प्रयोजनका निमित्त फागुन ९ गते बूक क्लोज मिति तय गरिएको थियो । यसको मतलव फागुन ८ गतेसम्म कायम शेयरधनीले हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन पाउँछन् । हकप्रद शेयर भर्ने अन्तिम मिति चैत २३ गतेसम्म छ ।
कम्पनीको खुद नाफा ४ करोड ७६ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करीब ४२ प्रतिशत बढी हो ।
पूँजी वृद्धि भएसँगै प्रतिशेयर आम्दानीलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन । यो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २५ दशमलव ४८ रुपैयाँबाट घटेर २० दशमलव ९१ रुपैयाँमा आइपुगेको छ ।
जगेडा कोषमा ५७ प्रतिशत वृद्धि भएर ११ करोड ९३ लाख छ । अघिल्लो वर्ष यही त्रैमासमा ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ थियो ।
सापटी रकम ८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । कर्जा सापट १५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ ।
कम्पनीको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा रहेको खुद ब्याज आम्दानी ३६ प्रतिशत बढेको छ । खुद ब्याज आम्दानीबापत ८ करोड ५ लाख कमाएको छ, जसमा ३१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपरेको छ भने जोखीम कोषबाट रकम फिर्ता गरेको छैन ।
सञ्चालन नाफा ७ करोड ४९ लाख छ । यो रकम अघिल्लो अर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा ४२ प्रतिशत बढी हो । अघिलो वर्षको सोही समयमा कम्पनीले सञ्चालन नाफा ५ करोड २९ लाख कमाएको थियो ।
कोषको लागत बढेको छ । ४ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको कोषको लागतमा वृद्धि भएर ९ दशमलव ५६ पुगेको छ ।
कम्पनीले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १२६ दशमलव १७, तरलता अनुपात १२ दशमलव ६५ प्रतिशत र प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ९२१ दश्मलव ८९ पैसा छ ।
खुद नाफा वृद्धिसँगै कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन । त्यस्तै, ५० प्रतिशत हकप्रद शेयरपश्चात् कम्पनीको पूँजी अझै बढ्छ । साथै, प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलनमा राख्ने चुनौती थपिएको छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त टेवाक्षेत्रमा
प्रतिरोध २ : ६२० । प्रतिरोध १ : ६०७ । हालको अन्तिम मूल्य : ५६५ । टेवा : ५५० देखि ५६० को क्षेत्र
यस कम्पनीको २५ फेब्रुअरी, २०१८ सम्मको दैनिक मैनबत्ती चार्टको आधारमा अन्तिम कारोबार मूल्य ५ सय ६५ मा छ । यो मूल्य अघिल्लो दिनको भन्दा ५ रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत कम हो । त्यस दिनको परिमाण १ हजार ९ सय ३७ मा छ । यो अघिल्लो दिनको भन्दा ३ हजार १ सय ३१ कित्ता कम हो ।
चार्टमा देखिएबमोजिम विगत ७ महीनादेखि बजारका उच्चतम बिन्दुहरू घटिरहेकोले बजारमा विक्रेताको चाप रहेको सङ्केत गर्छ । हाल मूल्य ५ सय ५० देखि ५ सय ६० को टेवा क्षेत्र नजीक आइरहेको देखिन्छ ।
एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज (ईएमए) : १२ र २६ दिनको ईएमएहरू एकआपसमा फराकिलो देखिएकोले बजारमा विक्रेताको चाप रहेको देखिन्छ ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) : १४ दिनको आरएसआई ४३ अङ्कमा छ । करीब २ महीनादेखि यसको प्रवृत्तिले बजारमा लगानीकर्ता अन्योलमा रहेको सङ्केत गर्दछ ।
मैनबत्ती : ३ दिनको मैनबत्तीलाई समग्र रूपमा हेर्दा बजारमा माग र आपूर्ति बराबर रहेको देखिन्छ ।
उल्लिखित मूल्यको प्रवृत्ति र सूचकहरूको आधारमा बजार विश्लेषण गर्दा बजार हाल टेवाक्षेत्रमा रहे पनि यो कम्पनीको शेयर खरीद गर्नुअघि जोखीम घटाउन सूचकहरूको सकारात्मक सङ्केत कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, हाल ‘पर्ख र हेर’ नीति अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।